Warshadda Soo Saarka - Soosaarayaasha Shiinaha iyo Shirkadaha Shiinaha
Maraqa soy Zhenji
Asalka Bixida Asalka ah ee Soonka ah
Bariin jilicsan oo Vinegar
IBC 12% Khudaar
Magaca badeecada: 12% bay khalkii jajabeen, khamrigii khalkii Cuntada: Biyaha, aalkolada la cuni karo. Isku-darka aashitada ≥ 12.00g / 100ml Nolosha shelf: 18 bilood Meel ku yaal meel hadhsan oo qallalan oo xidhidhsan. Muuqaalka Alaabta: Xaalku waa cad yahay, roob la'aan, xasilooni aad u sarreysa iyo dib-u-soo-noqosho la'aan. Adeegsiga: Adeegsiga xilliga xawaaraha xarunta, warshadaha wax lagu karsado, keydinta cuntada, taangiga cunnada, warshadaha daawada. Tilmaanta: 1000L IBC 20 durbaan ee 20FCLL Macluumaadka Nafaqada Cabbirka cabirka: 100mL NRV% Tamarta ...
Caddaan Bariis Caddaan
Magaca badeecada: 9% Weelka bariiska ah ee bariiska ah ee Halal la caddeeyay, oo khal bariis cad ah Cuntada: Biyaha, bariiska alcohol khamriga la cuni karo. Isku-darka aashitada ≥ 9.00g / 100ml Nolosha shelf: 12 bilood Meel ku yaal meel hadhsan oo qallalan oo xirran. Muuqaalka Alaabta: Xaalku waa cad yahay, roob la'aan, xasilooni aad u sarreysa iyo dib-u-soo-noqosho la'aan. Adeegsiga: Adeegsiga xilliga xawaaraha xarunta, warshadaha wax lagu karsado, keydinta cuntada, taangiga cunnada, warshadaha daawada. Tilmaanta: 25L baaldi caag ah 700 oo baaldi ah 20FCLL Information Information S ...
Magaca badeecada: zhenji soy sauce Xalaal la aqoonsan yahay, Suugo soy saafiga ah Cuntada: Biyaha, soybean la jebiyey, qamadiga, cusbada. Amino acid nitrogen (sida laga soo xigtay nitrogen) ≥ 0.80g / 100ml Tayada: Fasalka koowaad nolosha Nolosha: 10 bilood Meel ku dhex yaal meel hadhsan oo qallalan oo xirran. Muuqaalka Alaabta: carafku waa hodan, dhadhankuna waa mid macaan. Adeegsiga: Waxaa si weyn loogu isticmaalaa cunnooyinka fudud, qajaar la ruugo, soy maraqa soodhada, maraqa suugada, hilibka la dubay, Maraqa dubay, maraqa hilibka la dubay, cuntada la qaboojiyey, xawaashka iyo cusbada milixda ...
Magaca badeecada: Suugo soy zhenji Maya Maraqa soy GMO Waxyaabaha ay ka kooban yihiin: Biyo, soybean la khafiifiyay, qamadi, cusbo. Amino acid nitrogen (marka loo eego nitrogen) ≥ 0.80g / 100ml Tayada: Fasalka koowaad nolosha Nolosha shelf: 12 bilood Kaydso meel hadhsan oo qallalan oo xirran. Muuqaalka Alaabta: carafku waa hodan, dhadhankuna waa mid macaan. Adeegsiga: Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa cunnooyinka fudud, qajaar la dubay, budada soy, maraqa suugada, hilibka la dubay, Maraqa dubay, maraqa hilibka la dubay, cuntada la qaboojiyey, xawaashka iyo cusbaynta waxyaabaha hilibka. Sp ...
Magaca badeecada: Suugo soy zhenji Si dabiici ahaan loo dubay, Suugo soy saafiga ah Cuntada: Biyaha, soybean la jebiyey, sarreen, cusbo. Amino acid nitrogen (marka loo eego nitrogen) ≥ 0.80g / 100ml Tayada: Fasalka koowaad nolosha Nolosha shelf: 12 bilood Kaydso meel hadhsan oo qallalan oo xirran. Muuqaalka Alaabta: carafku waa hodan, dhadhankuna waa mid macaan. Adeegsiga: Waxaa si weyn loogu isticmaalaa cunnooyinka fudud, qajaar la dubay, budada soy, maraqa suugada, hilibka la dubay, Maraqa dubay, maraqa hilibka la dubay, cuntada la qaboojiyey, xawaashka iyo cusbada
Kosher shahaado leh, oo khal bariis ah Waxyaabaha ay ka kooban yihiin: biyo, soodhada galleyda leh ee sokorta leh, sonkorta cad, cusbo, gulukoos, aalkolo, bariis, MSG, citric acid, sodium benzoate, sucralose Total acid acid 3.50g / 100ml nolosha shelf: 12 bilood. Ku keydi meel hadh leh oo qallalan oo xidhxirran. Tilmaamaha wax soo saarka: Adeegsiga macaan iyo dhanaan: Waxay ku habboon yihiin cunnada Jabaan, sushi Tilmaanta: 18L halkii kartoon 1000 kartoonkiiba 20'FCL Macluumaadka Nafaqada Cabbirka Cabbirka: 100mL NRV% Tamarta 511kJ 6% Protein 0g ...
Magaca badeecada: zhenji soy sauce No GMO, Suugo soy saafiga ah Cuntada: Biyaha, soybean la khafiifay, sarreen, cusbo. Amino acid nitrogen (sida laga soo xigtay nitrogen) ≥ 0.80g / 100ml Tayo: Fasalka koowaad Nolosha shelf: 6 bilood Ku keydi meel hadhsan oo qallalan oo xirran. Muuqaalka Alaabta: carafku waa hodan, dhadhankuna waa mid macaan. Adeegsiga: Waxaa si weyn loogu isticmaalaa cunnooyinka fudud, qajaar la ruugo, budada soy, maraqa suugada, hilibka la dubay, Maraqa dubay, maraqa hilibka la dubay, cuntada la qaboojiyey, xawaashka iyo cusbaynta waxyaabaha hilibka ...
Khamriga bariiska cad waa midab la'aan, cad, dhanaan iyo udgoon. Isku darista qabow iyo karinta waxay sii hayn kartaa saxanka midabkii asalka ahaa. Waxyaabaha ay ka kooban yihiin: biyo, bariis, aalkolo la cuni karo, cusbo, gulukoos Isku-darka aashitada ≥ 3.50g / 100ml Kaydinta meel hadh leh oo qallalan oo xidhan. Nolosha shelf: 24 bilood Tilmaanta: 500mL * 12 halkii kartoon 1500 kartoonkiiba 20'FCL Macluumaadka Nafaqada Cabbirka adeega: 100mL NRV% Tamarta 93kJ 1% Protein 0g 0% Fat 0g 0% Karbohaydrayt 2.6g 1% S ...
9% khal bariis Waxaa sameeya farsamada halsano ee qumbaha qarsoon. Waxay ku habboon tahay ukunta jaranjarada, soybean madow iyo soybean. Waxay ku baabi'isaa ukunta ukunta gudaheeda 24 saacadood markii aan sameysanno ukunta khal. Waxyaabaha ay ka kooban yihiin: biyo, bariis, aalkolo la cuni karo Isugeynta aashitada 00 9.00g / 100ml Kaydka ku yaal meel hadhsan oo qallalan oo xidhan. Nolosha shelf: 24 bilood Tilmaanta: 500mL * 12 halkii kartoon 1500 kartoonkiiba 20'FCL Macluumaadka Nafaqada Cabbirka Cabbirka: 100mL NRV% Tamarta 130kJ 2% Prot ...
1 + 1 khal bariis jilicsan Waa midab jilicsan oo dhadhamiya. Waxay ku habboon tahay qaababka karinta kala duwan. In kasta oo lagu hayo midabkii asalka ahaa ee khudradda, waxay ka dhigi kartaa inay dhadhamiyaan cillad iyo raaxo. Markii loo isticmaalo lebisashada iyo maraqa lagu qubo, waxay dhadhanka ka dhigi kartaa dhadhan jilicsan, iskudhis, tartiib iyo firfircooni. Waxyaabaha ay ka kooban yihiin: biyo, bariis, aalkolo la cuni karo, Suugo soy, sonkorta cad,, lactic acid, citric acid, malic acid, soodilo succinate, sodium benzoate, I + G, sucralose. Isugeynta aashito ≥ 4.00g / 100ml S ...
Magaca badeecada: Suugo soy Zhenji Suugo Zhenji soy waxaa laga sameeyay soybean non-GMO iyo sarreen aad u sareeya oo leh teknolojiyad soo saarida sare. Waxyaabaha ay ka kooban tahay: biyo, soybate la jebiyey, qamadi, cusbo, potassium sorbate, I + G, sucralose Amino acid nitrogen (sida laga soo xigtay nitrogen) ≥ 0.70g / 100ml Tayada: Kaydka fasalka koowaad ee meel qoyan oo qoyan oo shaabadaysan. Nolosha shelf: 24 bilood Tilmaanta: 1L * 12 halkii kartoon 1280 kartoonkiiba 20'FCL 500mL * 24 halkii kartoon 1100cartons halkii 20'FCL Macluumaadka Nafaqada ee u adeega S ...
Daodao soy soy fudud
Magaca Waxsoosaarka: Daodao Light Soy Sauce Waxaa badanaa loo isticmaalaa uuminta iyo walaaq-soorida ama sida labiska ama suugo digsi, cusub oo dhadhan fiican leh. Waxyaabaha ay ka kooban tahay: biyo, soylo, dhir, cusbo, aalkolo la cuni karo, glucose, monosodium glutamate, karam, sodium benzoate, I + G, sucralose. Amino acid nitrogen (sida laga soo xigtay nitrogen) ≥ 0.40g / 100ml Tayo: Xaddiga fasalka saddexaad ee meel hadhsan iyo meel engegan oo shaabadaysan. Nolosha shelf: 24 bilood Tilmaanta: 500mL * 12 halkii kartoon 1500 kartoonkiiba 20'FCL Nafaqada Infor ...
Adress: No.34 GuangAn waddo, Shijiazhuang magaalada 050011, gobolka Hebei, Shiinaha
Orod, aynu orod xoog leh!
Ubax iyo qosol, kor u fuulaya jidka oo dhan
La dagaallanka faafa, muuji jacayl, badbaadi pe ...
Nuxurka websaydhkani wuxuu waafaqsan yahay sharciga iyo xeerarka Shiinaha!